शरीरमा रगतको कमी छ ? यी आहार निकै उपयोगी सावित – Etajakhabar
शरीरमा रगतको कमी छ ? यी आहार निकै उपयोगी सावित
ताजा खबर :- व्यस्त जीवन के चलते पुरूषों को इस बात का पता ही नहीं चलता है कि शरीर में खून की कमी हो रही है। हाल ही में हुए नए शोध में यह बात सामने आई है कि भारतीय पुरूषों में खून की कमी अधिक हो रही है। और धीरे धीरे उनकी सेहत खराब होती जा रही है। जिसकी कई वजह हैं। शरीर में खून कई तरह के तत्वों से बनता है। आयरन उनमें से एक एैसा तत्व है। जिसे हम हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। भाग दौड़ वाली लाईफ में शरीर में प्रोटीन की प्रयाप्त मात्रा न मिलने की वजह से खून की कमी हो रही है।(Health tips for mens)
व्यस्त जीवनशैलीका कारण अधिकांश पुरुषलाई थाहा नै हुँदैन कि शरीरमा रगतको कमी हुँदैछ । एक अनुसन्धानका अनुसार पुरुषमा रगत रगतको कमी अधिक हुँदैछ र बिस्तारै-बिस्तारै उनीहरूको शरीर खराब हुँदै गईरहेको छ । जसको थुप्रै कारण छन् । शरीरमा रगत विभिन्न किसिमको तत्वहरूबाट बन्छ । दैनिक व्यस्त दिनचर्याको कारण शरीरलाई प्रोटीनको प्रयाप्त मात्रा प्राप्त नहुँदा रगतको कमी हुँदैछ ।
सही जानकारीको राखी सावधानी अपनाउन सकेमा यस समस्याबाट बँच्न सकिन्छ । यसकारण रगत बढाउने चीजहरूको सेवन गर्न आवश्यक हुन्छ । यदि कुनै रोगको कारणले रगतको कमी भएको छ भने यसको उपचार गर्नुपर्दछ तरपनि अधिकांश समस्याहरू उचित पोषणको कमीले हुन्छ ।
शरीरमा रगत बढाउने आहारहरू:-
केरामा पाईने प्रोटीन, आइरन र खनिजले शरीरमा रगत बढाउँछ । यसकारण दूधको साथमा हरेक बिहान केराको सेवन गर्नुहोस् । केरा अल्सर, मृगौला सम्बन्धि रोग, पेचिश र आँखाको समस्याको लागि पनि निकै प्रभाकारी उपाय मानिन्छ ।
पालकलाई आयुर्वेदिक र आधुनिक चिकित्सामा रगत बढाउने आहार भनिन्छ । यदि तपाई केही दिनसम्म पालकको रसको सेवन गर्नुहुन्छ भने यसले रगतको कमीलाई पुरा गर्छ । यसले हिमोग्लोबिनलाई बढाउँछ किनकि यसमा आइरन प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । कुनै पनि रोगको कारणले शरीरमा रगतको कमी भएमा पालकको पातलाई राम्रो सँग पानीमा धोएर यसको जूस निकालेर नियमित रूपमा बिहान-साँझ पिउनुहोस् ।
रगतको कमीलाई हटाउनको लागि मेथी नियमित सेवन गर्नुहोस् । यसले रगत शुद्ध गर्नुको साथै स्वास्थ्यको लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । आइरनको अधिकताको कारण यसले शरीरमा हिमोग्लोबिनलाई सन्तुलित राख्छ ।
जुन पुरुषलाई रगतको कमी हुन्छ, उनीहरूले चुकुन्दरको रसलाई गाँजरको रसमा मिलाएर पिउनुहोस् । सलाद या सब्जीको रूपमा चुकुन्दरको सेवन गर्न सकिन्छ । यसले शरीरमा रगतको कमीलाई पुरा गर्नुको साथै ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट पनि मुक्ति दिलाउँछ । पुरुषको त्वचालाई जवान बनाई राख्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
उखुको जूस पिउँदा रगत सफा हुन्छ । रगतको कमीलाई हटाउनको लागि उखुको ताजा जूस सेवन गर्नुपर्दछ ।
बदाममा पाइने भिटामिन र आइरन शरीरमा कपर(Copper) बनाउँछ, जसले रगतमा पाईने कणहरूको कमीलाई हटाई यसलाई सफा गर्छ । यसकारण पुरुषले बदामको अधिक सेवन गर्नु पर्दछ ।
टमाटर रोगहरूसँग लड्नका लागि शरीरको प्रतिरोधक शक्ति बढाउँछ । टमाटरको सेवनले रगतको कमी हुँदैन । टमाटरको सूप या टमाटर खाँदा रगतको मात्रा शरीरमा बढ्छ । टमाटरमा आइरनको मात्रा अधिक हुन्छ ।
शरीरमा रगतको मात्रालाई बढाउन अमला एक अति नै प्रभावकारी फल हो । यसमा भिटामिन सी पाईने हुँदा स्वास्थ्यलाई कहिलै खराब हुन दिँदैन ।
गाँजरमा आइरनको मात्रा सबैभन्दा बढी हुन्छ । गाँजर सेवनले शरीरमा तुरुन्त रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १६, २०७४ समय: १६:२५:४३